IBill Gates Index Tracker yokuKhangela- Ilungelo laseMelika lokwazi
IBill Gates yokuKhangela ukutya
Olu ngcelele lwamanqaku ngo UStacy Malkan kuvavanywa iBill Gates kunye nenkqubo yophuhliso lwezolimo kwiGates Foundation kunye nefuthe lezopolitiko kwiinkqubo zokutya zehlabathi. Kutheni le nto silandela iiGates? Funda iposti yethu. Kwaye nceda ubhalisele incwadana yethu yasimahla ukufumana uhlaziyo. Ungathumela iingcebiso nge-imeyile ku stacy@usrtk.org.
Ukuhlaziywa ngoMatshi 4
The Isiseko seBill & Melinda Gates uchithe ngaphezulu kwe-5 yezigidigidi zeedola kwimizamo yakhe Ukuguqula iinkqubo zokutya eAfrika, kunye utyalo ezo zizenzelwe ukunceda izigidi zamafama amancinci ukuzikhupha kwindlala nobuhlwempu. ” Ingoma ekhulayo yabagxeki ithi isiseko sophuhliso lwezolimo - sekelwe kwi Imodeli "yenguqu eluhlaza" yokwandiswa kwemizi-mveliso -Ziphelelwe lixesha, ziyingozi kwaye zithintela utshintsho oluyimfuneko ukondla umhlaba kunye nokulungisa imozulu.
Idabi beliqhubeka ngaphezulu kweshumi leminyaka njengoko intshukumo yolawulo lokutya e-Afrika iye yaxhathisa inyanzeliso yezolimo olunzulu ngamachiza kunye nembewu enegunya lobunikazi abaxhasi abathi ziyimfuneko ukunika amafama ukhetho kunye nokukhuthaza imveliso yokutya.
Imodeli ebhetele, intshukumo yokutya ithi, inokufumaneka kwiiprojekthi zezolimo ukwanda kwemveliso ngeendleko eziphantsi kunye nemivuzo ephezulu yamafama. A Iphaneli yenqanaba eliphezulu leengcali kuba iZizwe Ezimanyeneyo ziye ndibize utshintsho lweparadigm kude kwezolimo olungazinzanga lweshishini kunye nase iinkqubo zezolimo bathi zinokuvelisa ukwahluka kwezityalo zokutya ngelixa zisakha ukomelela kwemozulu.
Ingxoxo-mpikiswano ikhokelela kumdlalo weqonga Ingqungquthela yokutya yokutya yehlabathi ye-UN. Endaweni yokulandela ingcebiso yeqela labo lobuchwephesha, iZizwe Ezimanyeneyo zibonakala zilungiselela ushishino Ukudlala ngamandla kwezolimo khokelwa ngu iziseko zeGates kunye neRockefeller kunye neQonga lezoQoqosho leHlabathi (i-WEF). Ngaphezulu kwamaqela oluntu angama-500 are uqhankqalaza ulwalathiso lwengqungquthela aUkuqeshwa kuka-Agnes Kailibata, umongameli we-Gates exhaswa ngemali yi-Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), Umthunywa okhethekileyo ophethe ulwalathiso lobuchule. La maqela afuna i-UN irhoxe kwi-UN-WEF pUbugcisa babo bathi "kuyanceda ukumisela 'ubungxowa-nkulu babachaphazelekayo' njengomzekelo wolawulo lweplanethi yonke.”
Kwi Ileta ebhekiswe kuNobhala Jikelele we-UN u-António Guterres kuFebruwari ophelileyo, imibutho eyi-176 evela kumazwe angama-83 inyanzelise ukuba arhoxise ukuqeshwa kukaKalibata kwaye ayeke imodeli "yotshintsho oluluhlaza" yokwandiswa kwezolimo kwezolimo. Izicwangciso zezolimo ze-AGRA ezifuna imali eninzi, ezisebenzisa iifosili, bathi, "azizinziswa ngaphandle kwenkxaso rhoqo." Nantsi ingcaphuno evela kwileta:
Ngo-Matshi, i UMbutho woLuntu kunye neNkqubo yoLuntu lwaBemi Umanyano lwamaqela oluntu angaphezu kwama-500 anamalungu angaphezu kwezigidi ezingama-300- xelele uThe Guardian Banokuyiduba ingqungquthela kwaye babeke intlanganiso efanayo. “Asinakutsibela kuloliwe ohamba ngendlela engeyiyo. Sithandabuza ukuba semthethweni kwale ngqungquthela. Thina uthumele ileta kunyaka ophelileyo kunobhala jikelele malunga neenkxalabo zethu. Khange iphendulwe. Sithumele enye kwinyanga ephelileyo, nayo engaphendulwanga, utshilo uSofía Monsalve Suárez, intloko ye Fian International. "Le ngqungquthela ibonakala inekhethe kakhulu ikwacebisa abadlali abafanayo abebekhe bajongana nengxaki yokutya."
NgoJanuwari, i-UN Special Repporteur kwiLungelo lokutya uMichael Fakhri, uprofesa wezomthetho kwiYunivesithi yase-Oregon, Ubhale isibheno ku-Kalibata ka-AGRA Ukuchaza inkxalabo yakhe enzulu malunga nesikhokelo seNgqungquthela.
UFakhri uchaze ukukhathazeka kwakhe kwi ividiyo ezimbini Udliwano-ndlebe: "Yile nto yokuba uluntu lwasekuhlaleni kunye namalungelo oluntu ekuqaleni ayekhutshelwa ngaphandle emva koko angeniswa kwaye abekelwa bucala," utshilo uFakri. “Kusithathe phantse unyaka wonke ukufumana amalungelo oluntu kwi-ajenda. KwiNgqungquthela yeeNkqubo zoKutya ephuma kwi-ofisi kaNobhala Jikelele we-UN, kusithathe unyaka ukucacisa, ukufundisa nokuqinisekisa iinkokheli zeNgqungquthela ukuba amalungelo abantu abalulekile. ”
Yiva uNjingalwazi uMichael Fakhri Chaza ukuba yintoni emngciphekweni kwiNgqungquthela ye-UN yezoKutya yokutya kunye nokuba kutheni iinkqubo zokutya ziyingxaki enkulu kunye nesisombululo esiphambili sokutshintsha kwemozulu.
Kuluhlu lwamanqaku aqala namhlanje, i-US Right to Know izakuphanda iBill Gates kunye nezicwangciso zeGates Foundation zokuphucula inkqubo yethu yokutya.
Kutheni le nto sigxile kuBill Gates? Amasango anamandla amakhulu ngokungaqhelekanga kwiinkqubo zethu zokutya, kwaye uyayisebenzisa. Amasango yi oyena mnini mkhulu weefama eMelika. Ukwangomnye ophambili kwihlabathi abatyali mali kwi-biotechnology iinkampani ezinelungelo lobunikazi kunye nokutya. IGates Foundation inefuthe elikhulu kwindlela iinkqubo zokutya ezikhula ngayo kuMazantsi oLuntu, nakuthethathethwano lwezopolitiko kwihlabathi liphela kunye nee-ajenda zophando ezichaphazela ukutya esikutyayo nesikutyayo.
Idilesi ehambelana nayo: Izicwangciso zeGates Foundation zokuphinda zenze iinkqubo zokutya ziya kuyonakalisa imozulu
sayina kwincwadana yethu yasimahla ukulandela uhlaziyo.
Ilungelo lase-US lokwazi liqela lophando elingenzi nzuzo elijolise ekukhuthazeni ukubonakala kwempilo yoluntu. Sisebenza kwihlabathi liphela ukubhengeza ukungalunganga komdibaniso nokusilela kukarhulumente okubeka emngciphekweni isidima senkqubo yethu yokutya, okusingqongileyo kunye nempilo yethu.